Ukukhiqiza Kwe-imeyili: Amaklayenti E-imeyili Wedeskithophu
I-imeyili Yedeskithophu: IseyiNkosi Yokukhiqiza
NgoMsombuluko, Agasti 16, 2010 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 URobby Slaughter
Kulezi zinsuku, kubonakala sengathi wonke umuntu usebenzisa amaklayenti we-imeyili asuselwa kuwebhu. Izinombolo ezingemuva kwalo mkhuba ziyamangaza. Emuva lapho iMicrosoft ibheka ukuthenga i-Hotmail isivele inayo Ababhalisile abangu-8.5 million—Futhi lokho kwakungo-1997. Namuhla, izinsizakalo ezahlukahlukene ze-imeyili zeMicrosoft zifika Abasebenzisi abayizigidi ezingu-250, nge-Gmail ivala abasebenzisi abayi-150 million. I-imeyili esuselwa kuwebhu iyaqhubeka nokuba ngomunye wamathrendi athandwa kakhulu nokusetshenziswa okukhulu kakhulu kobuchwepheshe bewebhu.
Inkinga kuphela ukuthi i-imeyili esekwe kuwebhu ayisebenzi kahle. Uma ufuna ukukhiqiza kakhulu kunabantu isigamu sezigidigidi abasebenzisa i-imeyili esuselwa kuwebhu, mane ushintshele kuklayenti le-imeyili ledeskithophu. Nakhu ukuthi kungani:
Abaningi bethu manje sekufanele bacubungule amakhulu emiyalezo ngokuhamba kosuku. Ngaso sonke isikhathi uma ubhekene nomlayezo kuhlelo lwe-imeyili olususelwa kuwebhu, kufanele ulinde iseva yewebhu ekude ukuze usingathe isicelo sakho. Kungabonakala sengathi i-Hotmail iyinhle kakhulu ekususeni imilayezo, kepha ayicishe isheshe njengokwenza kanjalo kwi-Outlook noma i-Thunderbird noma i-Mail. Ukungezwa kwesigamu-kwesibili ngokuchofoza ngakunye kungahle kungabonakali njengokuningi, kepha uma ubhekene nezinkulungwane zokuchofoza uchitha imizuzu eminingi. Ngaphezu kwalokho, ijubane eliphelele leklayenti lakho le-imeyili elincike kuwebhu alincikile kwikhompyutha yakho kepha kuxhumano lwakho lwe-inthanethi Qonda i-wifi hotspot enabantu abaningi ngisho ne-Gmail yehlisa ukukhasa.
Umehluko oyinhloko phakathi kwe-imeyili esuselwa kuwebhu ne-imeyili esekwe kudeskithophu yi- ukulandelana kwezinyathelo zokufinyelela. Uma unamathisela ifayela kumyalezo ku-Yahoo! Imeyili, kufanele ulinde kuze kuphele inqubo yokulayisha ngaphambi kokuthi uthumele umyalezo. Lokhu kumane kuyimvelo ye-imeyili esekwe kuwebhu. Uhlelo lokusebenza lisebenza kuwebhu, ngakho-ke awunakwenza lutho ngombhalo kuze kube konke okuqukethwe kwakho kudluliswa nge-Intanethi.
Namathisela ifayili emlayezo kuhlelo lwakho lwe-imeyili yedeskithophu, noma kunjalo, inqubo iyashesha. Akunandaba ukuthi leli fayela lingu-1k noma u-10MB. Akunandaba ukuthi ukuxhumano olusheshayo noma oluhamba kancane kabuhlungu. Eqinisweni, awudingi nokuba ku-inthanethi ukubhala ama-imeyili, ukufaka okunamathiselwe, kanye nolayini ngokuthumela kwabo! I-imeyili yakho yedeskithophu isebenza ngokufana neposi lendabuko. Ungacubungula imilayezo noma kunini lapho uthanda nalapho uthanda khona, noma ngabe usondele kangakanani kumphathi weposi.
Kubukeka sengathi i-imeyili esekwe kuwebhu kufanele iwine ngaphambili kwesici. Ngemuva kwakho konke, ungangeza ikhodi entsha kuhlelo lokusebenza ngaphandle kokudinga abasebenzisi ukuthi balande noma yini. Futhi, abahlinzeki be-imeyili abasuselwa kuwebhu bahlala bememezela izinto ezintsha ezintsha. I-Google Blog Usanda kumemezela ukuthi uma usebenzisa isiphequluli se-Google Chrome manje usungahudula bese uphonsa okunamathiselwe kudeskithophu yakho!
Linda: hudula bese uphonsa okunamathiselwe? Ake sibone, lokho bekutholakala kumakhasimende we-imeyili wedeskithophu kusukela okungenani ngo-1997. Futhi uma sikhuluma ngeGoogle, babonakala kungukuphela kweklayenti le-imeyili elisuselwa kuwebhu elinikeze "ukusetshenziswa okungaxhunyiwe ku-inthanethi" ngokusemthethweni cishe unyaka ogcwele.. Leso yisici obeyingxenye yawo wonke amaklayenti wemeyili asuselwa kudeskithophu kusukela cishe ngo-1979. Uxolo, abalandeli be-imeyili abasuselwa kuwebhu. Awunqobi umncintiswano wezici.
Ngishayele i-paranoid, kepha angiwuthandi umqondo wokuthembela kuyo yonke i-imeyili yami ukuze ngihlale efwini ngomhlinzeki othile wamahhala. Kanye ngesikhashana kugadla inhlekelele. Neklayenti le-imeyili ledeskithophu, ngokuzenzekelayo uthola okungenani amakhophi amabili ayo yonke imilayezo yakho. Ikhophi eyodwa igcinwa ku-inthanethi, kanti enye ivumelaniswe neklayenti lakho ledeskithophu. Uma unamakhompyutha amaningi (futhi ngicabanga iningi lamafayela we- Martech Zone i-readers do) unamakhophi amaningi ngokuzenzakalela.
Ukudonsa Okukodwa (kodwa hhayi ngempela)
Kunendawo eyodwa kuphela lapho iklayenti lemeyili elisekelwe kuwebhu lingcono kuneklayenti lemeyili ledeskithophu: usebenzisa ikhompyutha ebolekiwe. Uma nje ukwazi ukufinyelela komunye umshini futhi ufuna ukubheka i-imeyili yakho, kuyasiza kakhulu ukukwazi ukugxumela kusiphequluli bese ubheka ngokushesha.
Kodwa-ke, lokhu akuyona inkinga uma ulungiselela iklayenti lakho le-imeyili ledeskithophu kahle. Ungahlala uhambisa umyalezo ngomhlinzeki wamahhala osuselwa kuwebhu ukuqinisekisa ukuthi uma kufanele ube nokufinyelela kwewebhu, ungakuthola.
Uma i-imeyili Yedeskithophu Ikulu Kangaka…
… Kungani wonke umuntu engayisebenzisi? Umbono wami ukuthi kuthatha umzamo omncane. Noma bobabili I-Zimbra futhi Thunderbird futhi I-Windows Live Mail bakhululekile ngokuphelele, bathatha imizuzu embalwa ukusetha. Uma usujwayele iklayenti elijwayele ukususelwa kuwebhu, mancane amathuba okuthi ushintshe.
Kepha ngiyacela, ngiyakuncenga, cabanga ngakho ukushintshela kwiklayenti le-imeyili ledeskithophu. Uzobona ukwanda okuphawulekayo ku- umkhiqizo we-imeyili. Sebenzisa amathuluzi enza kube lula ukwenza izinto.
Tags: ideskithophui-imeyili yedeskithophuGmailumbonoukubuka kuqhathaniswa ne-gmailUkukhiqizai-imeyili esekelwe kuwebhu
URobby Slaughter ungungoti wokuhamba komsebenzi nokukhiqiza. Ukugxila kwakhe kusiza izinhlangano nabantu ngabanye ukuthi basebenze kahle, basebenze ngokwengeziwe futhi baneliseke ngokwengeziwe emsebenzini. URobby ungumnikeli ojwayelekile komagazini abambalwa besifunda futhi uye waxoxwa nezincwadi zikazwelonke ezifana neWall Street Journal. Incwadi yakhe yakamuva ithi Iresiphi Enganqobeki Yemicimbi Yokuxhumana.. URobby ugijima i- ukubonisana ngokuthuthukisa ibhizinisi inkampani.
Ubukela phansi imithombo yezokuxhumana
I-Antithesis Yakho Yonke Inhlalo? Ngempela?
Aug 16, 2010 ngo-12: 25 PM
Ngeke ngivumelane ngephuzu elilodwa, @robbyslaughter, bese ngiphikisana nelinye. Ngokuvamile kuthatha isikhathi esincane ukuthi iklayenti lewebhu liye liyothatha i-imeyili kunokwenza iklayenti ledeskithophu. Abasebenzisi abaningi abahlali kwingqalasizinda ephezulu ye-bandwidth, kepha amaklayenti wewebhu enza njalo!
Iklayenti lewebhu le-Google Apps likhulu kakhulu, lishesha kakhulu ekufuneni i-imeyili kuneklayenti ledeskithophu ngenxa yendlela idatha ekhonjiswe ngayo namandla esiphakeli ahleli kulo Uma ngisesha nge-desktop yami, kungathatha amasekhondi ambalwa ukuthola umphumela, kepha i-Google Apps iyashesha.
Ngiyavumelana ne-paranoia, noma kunjalo. Ngithanda ukukwazi ukufinyelela i-imeyili yami ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi.
Aug 16, 2010 ngo-12: 39 PM
Kuyathakazelisa ukuthi kuyiqiniso ukuthi iklayenti lewebhu lingakwazi thola i-imeyili esheshayo kuneklayenti ledeskithophu, ngoba njengoba ushilo kungqalasizinda ye-bandwidth ephezulu. Kepha kusazodingeka ukuthi uthumele leyo imeyili phansi kwepayipi elihamba kancane kusiphequluli sakho, ngakho-ke ngingaphikisana ukuthi akusheshi ngempela! (Uma kukhona okuthile, kufanele kuhamba kancane ngenxa yayo yonke i-web ngaphezulu ngaphezulu.)
Uqinisile ukuthi ukuseshwa kwe-GMail kuyashesha kunokuthi, Ukusesha KweWindows kwe-Outlook. Lokhu kungenxa yehardware esheshayo, kepha futhi ngenxa yama-algorithms angcono. Ngingaphikisa ukuthi uma uxhuma usesho lwe-Google Desktop kuklayenti lakho le-imeyili lasendaweni, kushesha kakhulu kune-Gmail.
Futhi, usenenkinga yokuthi uma umyalezo utholakele ngengqalasizinda ye-GMail kufanele ukhonjiswe kuwe ngokuxhumeka okuhamba kancane.
Noma kunjalo, usengathola okungcono kakhulu kuwo womabili la mazwe. Uma ufuna ukusebenzisa isivinini sefu ukuqinisekisa ukuthi i-imeyili itholakele, gxumela iklayenti lakho lewebhu. Uma ufuna ukusebenzisa amandla we-computing wefu ukwenza ukusesha okukhanyayo okusheshayo, iklayenti lakho ledeskithophu kufanele likwazi ukulisebenzisa.
I-imeyili yedeskithophu iwina, izandla phansi!
Aug 16, 2010 ngo-3: 09 PM
Ngokufanayo noDoug kufanele ngivume futhi angivumelani.
Okokuqala ngithanda ukusho ukuthi ukufika noma kuphi lapho ngingabheki khona njengokufaka impikiswano nganoma iyiphi indlela ngoba usengayisebenzisa i-webmail lapho ungekho, ideskithophu ayikukhanseli lokho.
Ideskithophu yePro - Nginama-akhawunti ama-3 engiwaqapha ngenkuthalo namanye amaningi engiwahlola ngezikhathi ezithile. Ngisebenzisa kuphela iklayenti ledeskithophu elilodwa kubo futhi lelo yi-akhawunti yomsebenzi wami weqembu kodwa lokho kungenxa yokuthi i-flaky nge-IMAP. Kepha ukube bekungekho bekungaba kuhle ukuba nabo bonke abathathu endaweni eyodwa. Ngisebenzise i-Thunderbird ikakhulu esikhathini esedlule futhi kwasebenza kahle kepha angikaze ngizizwe ngilungile.
Uma ubhekana nesikhathi / izimo eziningi ezingaxhunyiwe ku-inthanethi kuhle ukuba ne-imeyili kepha ngokwami ​​angivamile ngaphandle kokuxhumeka kohlobo oluthile futhi lapho ngiyinto yokugcina engifuna ukuyenza ukuhamba nge-imeyili yami. Kubahambi abasindayo (pre wifi esibhakabhakeni) lokhu kungaba yinto edingekayo, njengokufaka noma yini enye efakwe endaweni ukuze ngiqhubeke nokusebenza.
I-Pro web - Usesho luvutha ngokushesha ku-Gmail, KODWA ezinye azizinhle kangako. I-webmail ye-groupwise idonsa kanzima maqondana nalokhu futhi kaningi ngizovele ngitshele othile ukuthi ngizolinda ngize ngisebenze ngosuku olulandelayo ukuze ngithole i-imeyili endala. Kepha nge-gmail kushesha kakhulu engake ngakubona ngokusesha i-imeyili nganoma yini. Ngijabulela nokuthi izingxoxo zami manje ezikhona nakulokho kuseshwa kodwa lokho akusikho ukuthi yi-100% efanelekile.
Futhi ngicabanga ukuthi inqwaba yekhanda okhuluma ngalo alisebenzi kakhulu isikhathi esiningi. Uma ubhekise ekulayisheni i-JS / HTML nokunye okusebenzisa isiza, lokho akufanele kudingeke isikhathi esiningi njengoba ikhompyutha yakho izoyifunda kusuka kunqolobane futhi uma uku-computer yomunye umuntu kuzoba kubi kakhulu ukubamba iklayenti ledeskithophu 🙂 Kepha usebenzisa into isibonelo se-webcafe, ilaptop yakho isazoba nezinto ze-webmail ezinqolobaneni ukuze lokho kungabi yinkinga enkulu. Uma kukhulunywa ngokuthola i-imeyili, i-gmail izobe ikuthumela inguqulo esikiwe (mhlawumbe i-json) ngaphezulu kwe-imeyili ephelele egcwele izihloko nokunye.
Futhi iklayenti ledeskithophu (mhlawumbe ungayivimba ekwenzeni lokhu, kepha ungalokothi udlale ngokwanele ngezisetho) izolanda izinanyathiselwa ngokuzenzakalela, ngakho-ke ungahle uvalelwe ulinde esithombeni se-10 Meg esithwele phambili sisuka emndenini wakho ngenkathi umuntu we-gmail wayengekho baphoqeleka ukukubamba lokho njengoba kanye lapho bevula futhi babona ukuthi kuyini bangakuziba okunamathiselwe.
Njengoba ngishilo, njengamanje ngisebenzisa kuphela iklayenti ledeskithophu le-GW futhi amanye ama-akhawunti wami ama-2 ngisebenzisa iwebhu kuphela. Ngingawuthanda kakhulu umhlaba we-hybrid lapho engingathola khona izinzuzo zazo zombili ezakhiwe zaba yinto eyodwa elula yokusebenzisa iklayenti kepha ukungabaza ukuthi kuzoza noma nini kungekudala. Ngakho-ke kimi iWebhu imvamisa iyinqoba enkulu futhi ibonakala ihlale ibushelelezi kimi. Kepha kuyehluka ngomsebenzisi ngamunye.
Aug 17, 2010 ku-8: 28 AM
Ngicabanga ukuthi impikiswano ayikho kangako phakathi kokuthi yimiphi imikhiqizo ethile engcono (GMail vs Thunderbird) kepha yikuphi platform inekhono lobuchwepheshe eliphakeme nokusetshenziswa.
Isibonelo, indlela esheshayo yokusesha i-imeyili yakho inenkomba yendawo ehlukile impela. Noma ngabe amasevisi osesho ashesha kangakanani efwini, kusamele ulinde isiphequluli sakho ukuthi silande futhi sinikeze imiphumela yosesho, bese ulinda ukuthi silande futhi sinikeze i-imeyili ngayinye. Ukuxhumeka kwesiphequluli / kwe-Intanethi kuhamba kancane kunesinye esiphakathi kwememori yakho ne-hard drive yakho, ngakho-ke i-imeyili yedeskithophu iyohlala iphakeme.
Ngokuphathelene nokusebenziseka, kuningi kakhulu ongakwenza ngohlelo lokusebenza lwedeskithophu ukuthi okuthile okusebenza ngaphakathi kwe-sandbox lesiphequluli sewebhu. Impela, iziphequluli zewebhu ziya ngokuthuthuka nsuku zonke. Nge-HTML5, manje kungenzeka ukwenza izinto esipheqululini ongazenza kuphela kudeskithophu ku- — oh, angazi, ngo-1993 noma ngaphezulu. Impela, kuhle ukuthi lokhu kusebenza kunoma iyiphi i- * khompiyutha esebenzisa isiphequluli sakho, kepha akunjengokungathi sinakho konke ukwehluka okungako.
Ekupheleni kosuku, iklayenti le-imeyili ledeskithophu lifana nokuba nelabhulali yakho siqu endlini yakho, kanti iklayenti le-imeyili lifana nokuba nencwadi eyodwa kuphela ngesikhathi ethunyelwa ngeposi. Vele kusebenza kahle kuzo zonke izindlela ukuba neklayenti le-imeyili ledeskithophu. Ungahle uthande “ukubuyela emuva” kwi-web-client uma udinga ngoba isoftware yakho yeklayenti ledeskithophu ayisebenzi, ngakho-ke usengathola okuhle kakhulu emhlabeni.
Aug 17, 2010 ngo-4: 35 PM
@robbyslaughter, bengikhuluma nangepulatifomu, benginikeza kuphela ngezinhlelo zokusebenza ebengizisebenzisa ukwenza kucace uma mhlawumbe bengiphuthelwe ukuphela konke kube yiklayenti le-imeyili ledeskithophu elixazulule ezinye zalezi zinkinga. Angibheki necala lami lokusebenzisa njengelodwa nokuthi abanye basebenzisa izinto ngokuhlukile futhi abanye bazoba nezinkinga ezahlukile kimi.
Okokuqala kusesho, Ngeke kusheshe ngaso sonke isikhathi emshinini wendawo, noma ngabe idatha ingeyasendaweni. Uma unama-gigs wedatha (ikakhulukazi idatha engalawulwa kahle engenziwanga kahle) kungaba imeyili noma yini, ngoba eyasendaweni akusho ukuthi ikhompyutha yakho izokwazi ukuyisesha kangcono bese isethi ephethwe kahle idatha ngamandla amaningi ngemuva kwayo. Ukuxhumeka kwe-inthanethi “okuhamba kancane” (lokho kuphela lapho kuthola khona inani lemininingwane elincishisiwe elinezinto kuphela ozidingayo ngaleso sikhathi) lizokwazi ukukuthola kalula okudingayo, njengoba noDoug asho ngemiphumela yakhe. Manje uma usuthole imiphumela yosesho, yebo ukuletha leyo imeyili eyodwa kulungile, kepha lapho leyo imeyili ngiyivulile imizuzwana eyi-10 edlule yakha iklayenti lewebhu ngoba ideskithophu ibisacwaninga ngakho-ke akunandaba kangako.
Lapho okunamathiselwe okukhulu kwe-imeyili kungena, ungakusingatha kube lula kuwebhu njengoba ungalokothi uyilande uma ungayidingi lapho iklayenti lakho ledeskithophu lasendaweni lizoyifuna khona isikhashana nokunye kwakho imilayezo ngeke ingene ngenxa yayo. Ukungadingi ukulanda konke okunamathiselwe okuyisiphukuphuku umuntu angithumela kona kuyisibusiso esikhulu enginaso maqondana ne-webmail.
Amaklayenti amancanyana ngokujwayelekile angaba nezinzuzo eziningi ngaphezu kwezingxenye zawo zamakhasimende eziwugqinsi, ikakhulukazi uma kuthinteka amathani wedatha, enza futhi adlule okungalunganga ukuze abenzele inzuzo. Angisho ukuthi kuzo zonke izimo zokusebenzisa lokhu kuyiqiniso, kepha ngikholwa ukuthi nakanjani lokhu kungenye yazo. Njengoba ngishilo ukuthi ngisazothanda ukubona indlela ephelele ye-hybrid (i-HTML5 izoba ingxenye eyodwa kuphela) eyenziwe evumela umsebenzisi wokugcina ukulawula okwengeziwe kanye namandla okusizakala ngazo zombili kepha lokho kungumsebenzi omningi hhayi inzuzo enkulu futhi abantu ebesizobheka ukuthi siyisebenzise kungenzeka bangachithi isikhathi sabo lapho bebona ukuthi iklayenti labo lilunge ngokwanele njengoba linjalo.
Aug 17, 2010 ngo-5: 13 PM
Ukusesha kufanele ngaso sonke isikhathi kusheshe emshinini wasendaweni kunomshini okude. Kuyiqiniso ukuthi umshini okude kungenzeka ukuthi usheshe (ngoba kungaba yiqoqo lemishini), kepha into enomkhawulo yi-bandwidth, hhayi amandla wokucubungula.
Njengokuqhathanisa, kuthatha iGoogle i-Desktop yami ukuthi ibe ngamasekhondi angu-0.19 ukusesha izinto ezingama-262,000. Angikwazi ukuthola i-GMail yokubika isikhathi sosesho, kepha konke ukusesha okusesidlangalaleni kwe-Google kuthatha okungenani imizuzwana engu-0.27. Lokho kungaba yizigidigidi zokungenayo, kepha yizinkulungwane zamakhompyutha. Kepha ake sicabange ukuthi imiphumela yami ayijwayelekile, futhi imvamisa ungakuthola, yisho isivinini esingu-10x kusesho olukude. Ngakho-ke sizobe sibheka ukuqhathanisa imizuzwana engu-0.19 namasekhondi ayi-0.019 asheshayo.
Ukudluliswa kwedatha kude kudinga isikhathi. Kimi ukuhambisa idatha phakathi komhlinzeki wokusesha okukude nomshini wami, kunezidingo zokubambezeleka nezomkhawulokudonsa. Ngikhiphe ipaneli Yesikhathi Esimatheni Kumathuluzi Wonjiniyela we-Google Chrome, nasekuchofozeni inkinobho ethi “Sesha Imeyili” ukuze ukuthola impendulo kuseyimizuzwana engu-0.50.
Ukucinga okukude: 0.50 s (latency) + 0.019 s + Ukunikeza isikhathi = 0.519 imizuzwana
Usesho Lwasendaweni: Isikhathi esingu-0.19 + Isikhathi sokunikela = 0.19 imizuzwana
Uzobona ukuthi esibonelweni sami akunandaba ukuthi usesho olwenzeka ngokushesha kangakanani. Kungaba yi-100x noma i-1000x noma i-instant, futhi kusazothatha isikhathi eside ukudlulisa kunokucinga endaweni yangakini.
Ngiyazi ukuthi kubonakala sengathi sihlukanisa izinwele. Uyini umehluko phakathi kwengxenye yesibili nengxenye yeshumi yomzuzwana?
Impendulo ithi: okuningi.
Aug 17, 2010 ngo-6: 25 PM
Bengicabanga ukuthi asikhulumi ngamapulatifomu athile? Ideskithophu yakwaGoogle ayilona iklayenti leposi okokugcina engiyibuke ngalo, kanti ngenkathi kuyisibonelo sokuthi ezinye izinto zingashesha kangakanani, akuguquli lokho ekusebenzeni amaklayenti eposi ledeskithophu engakwenzi lokho kahle, njengoba kushiwo yibo bobabili Isipiliyoni sami nesikaDoug nabo, futhi angikaze ngizwe ukuthi kukhona umuntu owenza kangcono. Ukusebenza kwe-theory akwenzi okuthile ukuthi kube ngumnqobi wezandla lapho kungekho muntu osondele ukuzizuza.
Futhi lena impikiswano encane yevesi elincane. Awuqinisekile ukuthi imigqa yekhodi iba yinto echazayo yokuthi okuthile kuncane noma kukhulu njengoba kulapho kwenziwa khona ukuphakamisa okunzima. Ngenkathi amaklayenti wewebhu eba mkhulu nge-HTML5 akuguquki ukuthi asezacile ngomsebenzi omningi okusakuhlelwe ukwenziwa ngohlelo olukude kepha manje ngosizo oluncane endaweni lapho kungenzeka.
Inothi elithakazelisayo, ngenkathi izikhathi zami zokuphendula ze-gmail zifana nezakho, Izinhlelo zami ze-Google ze-Domain yakho zingama-125-150ms.
Njengoba ngishilo kunobuhle nobubi kubo bobabili kepha ukusho ukuthi “i-imeyili yeDeskithophu iyanqoba, izandla phansi!” kukude nje uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kwangempela nokusetshenziswa kwamacala.
Aug 17, 2010 ngo-7: 51 PM
Ideskithophu ye-Google ingasetshenziselwa ukusesha izingobo zomlando zeposi zasendaweni. Ngiyayisebenzisa (futhi ngiyisebenzise esilinganisweni sami ngenhla) ukusesha isitolo sami seposi futhi beshesha ngokweqile.
Kokuhlangenwe nakho kwami, amaklayenti wedeskithophu ashesha kakhulu, athembeke kakhulu, aguquguquke kalula futhi anezici ezingcono cishe kuzo zonke izici. Okuwukuphela kokuhlukile ukuthi ungafinyelela kuklayenti lewebhu kusuka kukhompyutha ehlukile, okuyisizathu esihle sokugcina ukufinyelela kwe-imeyili yakho kusuka kwelinye lala maklayenti nokuyigcina ivumelanisiwe ezindaweni zombili.
Ngicabanga ukuthi kumakhasimende angasebenzisi kakhulu i-AJAX, ungaphikisana nokuthi iklayenti lincanyana. Ngemuva kwakho konke, isiphequluli kuleso simo sivele sinikeze amakhasi we-static, futhi iseva ekude ithatha isinqumo sokuthi izokhombisa ini. Kepha uma uthumela imigqa yekhodi eyisigamu sesigidi kwikhompyutha yeklayenti ukuze ikwenze, kubonakala sengathi umugqa okungenani uqala ukuqala ukufiphala. Lezi akuzona izinsuku zakudala ze-X Windows, lapho i-terminal yakho ingaba "isiginali esiyisimungulu". Impela, okuningi kokuphakamisa okusindayo kwenziwa yisiphequluli. Lokhu kuboniswa iqiniso lokuthi awukwazi ukusebenzisa i-Gmail kusiphequluli esidala ngaphandle kokushintshela “ekubukweni okucacile kwe-HTML.”
Okuwukuphela kokubi okuphawuleka engikubonayo kumaklayenti eposi ledeskithophu (kokubili cishe nangokucabanga) ukufinyelela i-imeyili yakho uma ungenayo ikhompyutha yakho. Futhi njengoba singekho isizathu sokungabi ne-imeyili yewebhu uma kungenzeka, ngicabanga ukuthi lokhu akuyona into embi kakhulu.
Iphuzu lokuthunyelwe kwami ​​bekungukukhombisa ukuthi izigidi zabantu zisebenzisa i-imeyili esekwe kuwebhu kuphela, noma kunezinzuzo ezinkulu ekusebenziseni iklayenti ledeskithophu njengeplatifomu yakho eyinhloko yeposi. Ngicabanga ukuthi ngikubeke kwacaca ukuthi lezi zinzuzo zikwedlula kude okuwukuphela kwenzuzo ye-imeyili esekwe kuwebhu: ukufinyeleleka kwikhompyutha ebolekiwe. Ezinye izinzuzo ezibonakalayo, njengokucinga okusheshayo nokubuyisa, kumane nje kubonwe.
Ngakho-ke ngimi ngesitatimende sami: "amaklayenti e-imeyili edeskithophu awina izandla phansi!" 🙂
Aug 18, 2010 ngo-1: 55 PM
Ngivumelana noDoug, ukusesha kuyashoda ku-Outlook (angiqiniseki ngezinye). IGoogle ibonakala inenkomba futhi isesha phansi pat, kanti, ngaso sonke isikhathi lapho ngivumela ukufaka inkomba kudeskithophu yami ngethemba lokusheshisa inqubo yokusesha, amathangi ami wokusebenza jikelele. Kubonakala sengathi iGoogle ingaba nesivinini esisheshayo sokucubungula kunami, hamba uyokuthola. 🙂
Ngo-Apr 1, i-2011 ku-5: i-55 PM
Lapha siku-2011, futhi konke ngaphandle kwempikiswano yakho ye-paranoia seyiphelile:
Isivinini: I-Gmail iyashesha kune-Outlook ekulayisheni, njengoba ishesha ekuphatheni imeyili
Isikhathi: I-Gmail inikeza wonke amakhono owathi awekho
Izici: I-Gmail ene-plug-in yesiphequluli se-ActiveInbox
Umsebenzisi angashaya ukuthumela aqhubekele phambili ngaphambi kokuthi ukulayishwa kokunamathiselwe kuqedile
Ungahlela ngokuhudula bese uphonsa
Ingabona imicu yengxoxo noma imilayezo engayodwana
Ingabe lokhu kungcono kunezici ze-imeyili zedeskithophu? cha. Ingabe ayalingana futhi ashesha ngokwanele ukudela inkinga yokusebenzisa isikhala sediski sendawo, njll.? Yebo.
Angazi ukuthi kungani noma ngubani onoxhumo lwe-inthanethi oluqhubekayo angenza noma yini NGAPHANDLE kokusebenzisa isistimu ye-imeyili enamandla yesiphequluli, njenge-Gmail + ActiveInbox
May 19, 2011 ku-1: 29 AM
Ngivumelana ngokuphelele nokubuyekezwa kwakho kwe-Gmail. Iklayenti lami ledeskithophu libukeka lifana nedinosaur uma liqhathaniswa ne-Gmail, ikakhulukazi kuzici. Noma kunjalo, ngisayikhetha.
I-Oct 19, i-2011 ku-2: i-58 PM
Kunomehluko phakathi kwezici nemikhawulo.
Isibonelo, i-Gmail ayinaso isici sokuhlunga ngosuku. Kimi, lokho kuyisiphukuphuku ngokuphelele. Kepha asikho isizathu sobuchwepheshe sokuthi kungani i-Gmail ingakwazi ukwenza lokhu. Alikho iphuzu eliningi lokuphikisana ngalezi zinhlobo zezici, ngoba zimane nje ziyizintandokazi.
Kodwa-ke, kunezinto ongeke uzenze kahle kumakhasimende we-imeyili asuselwa kuwebhu. Isibonelo esisodwa ukuphatheka kwedatha. Iklayenti ledeskithophu ligcina i-imeyili yakho endaweni yangakini, eqinisekisa ukuthi abanye abahlinzeki bamafu abakwazi ukuyisusa ngengozi. Lesi akusona “isici” se-imeyili yedeskithophu njengoba kungumkhawulo we-imeyili esuselwa kuwebhu.
Ngo-Apr 19, i-2011 ku-5: i-27 PM
Nginombhali impela. Ake ngizame ukumeseka ngokubuka kuka-2011.
Ngiyavuma. I-Gmail idlulile impela uma kuza kuyo. Kepha kunezindlela lapho i-imeyili yedeskithophu ishaya ngayo. I-intanethi eyabiwe yento eyodwa. Yize ukutholakala kwayo ngokungandile kakhulu ungawubona umehluko obekungawenza ngaleso sikhathi. Futhi, ngingasho ukuthi i-gmail iyashesha uma ufunda i-imeyili eyodwa noma ezimbili ngasikhathi. Kepha yenze ibe ngama-20 noma ama-30 noma ama-50 futhi ideskithophu isishaye kakhulu. Uvele ucindezele phansi phansi bese manje umaka njengokufundiwe ngenkathi ubuka kuqala / ufunda ngasikhathi sinye. Ngemeyili eyodwa noma amabili, ngicabanga ukuthi i-gmail iyona ewinile.
I-gmail evunyelwe yenze ingxenye yokuqala yaba yinhle. Kepha, angifuni uma kungimi nje, ngincamela indlela yokuqhafaza ye- Send-ontont care enikezwa yideskithophu. Icishe ilapho nge-gmail kepha hhayi impela. Engxenyeni yesibili engaxhunyiwe ku-inthanethi, isaphatha okuhle ngaphandle kokuthi usebenzise ama-googles mail angaxhunyiwe ku-inthanethi engingawenzi. Kepha lokho kunciphisa impela umugqa phakathi kwedeskithophu ne-webmail.
Angiqondi ukuthi uthi iwebhu / i-gmail inezici ezingcono. Kwehlela kokuthandayo ngombono wami
Ngeke kushintshe (ngicabanga ukuthi !!)
May 19, 2011 ku-1: 25 AM
Ngiphinde ngithande amaklayenti we-imeyili wedeskithophu yize ngiphikisana ngokuphelele nokuthi i-Gmail ayishayi amaklayenti wedeskithophu kuzici (kuningi okuningi okushiwo kule ndatshana, njengokuhlanganiswa neGoogle Docs ngokwesibonelo).
Ngicabanga ukuthi into ekhanga kakhulu kumakhasimende wedeskithophu ukuthi avumela ukuhlanganisa amabhokisi wokungenayo e-imeyili avela ezizindeni ezahlukahlukene (njengamakheli we-imeyili ochwepheshe) abe yi-homogen eyodwa, isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula lapho ama-imeyili angahudulwa phakathi kwamabhokisi okungenayo futhi ahlelwe kumafolda afanayo njll. ukuthi ama-imeyili agcina ungaxhunyiwe ku-inthanethi, njengoba kushiwo.
Nginombuzo olula maqondana namakhasimende wedeskithophu okungekho noyedwa obonakala ekwazi ukuwuphendula, ngakho-ke ngizozama lapha
- Kungenzeka yini ukusetha amaklayenti ama-imeyili we-desktop amabili ngekheli elilodwa le-imeyili?
Masithi sine-e-store futhi sobabili sifuna ukwamukela ama-imeyili okusekela amakhasimende kumaklayenti ethu e-imeyili yedeskithophu, futhi kusobala ukuthi sinekheli elilodwa kuphela le-imeyili lokusekela eselivele lisunguliwe, singakwazi ukulisetha namakhasimende womabili wedeskithophu?
Angikholwa ukuthi yithi kuphela abalingani bebhizinisi emhlabeni abafuna ukwenza lokho, ngakho-ke kungani kungekho muntu ongaphendula?
Amaklayenti ethu wedeskithophu yi-MacMail ne-Outlook 2007, uma lokho kwenza umehluko. Ngicabanga ukuthi akufanele, ngoba ikheli le-imeyili lisethwe ngaphakathi kwamakhasimende wedeskithophu hhayi kuphaneli yomlawuli we-e-esitolo. Kungakho futhi ngicabanga ukuthi kufanele KULUNGILE ukukwenza lokho?
Ngicele 'umxhumanisi wezinsizakalo zamakhasimende wami e-esitolo' kaninginingi ngalokhu. Ufike nezimpendulo ezimbalwa ezingacacile ezingabalulekile futhi manje wathi 'kuzodingeka ngithinte i-Apple, noma iMicrosoft ukuthola izici ezithuthukile'… Imfucuza.
Ngithumele nombuzo lapha (kuQuora) naku-Twitter amahlandla amaningi, azikho izimpendulo kuze kube manje.
Ngingazama nje ukubona ukuthi kuyasebenza yini. Kodwa-ke, umlingani wami webhizinisi akayona i-tech savvy futhi kulindeleke ukuthi ngimsize ukusetha i-imeyili ku-Outlook yakhe lapho ebuya. Ngakho-ke ngithanda ukwazi kusengaphambili ukuthi kungenzeka yini ukuthi sabelane ngekheli le-imeyili ngendlela esifuna ngayo, ngakho-ke kungenjalo ngingaqhamuka nomunye umqondo kusengaphambili kunokumane ngimbheke ngehlazo lapho lingasebenzi.
May 19, 2011 ku-1: 28 AM
Uma usebenzisa i-IMAP kune-POP, iklayenti lizovumelanisa kunokuba
download. Ngisebenzisa i-IMAP ngezinhlelo zokusebenza ze-Google futhi nginamakhasimende ama-4 ngokuhlukile
amadivayisi angenazo izingqinamba.
May 19, 2011 ku-1: 52 AM
Douglas, angiqiniseki ukuthi nginawe. Ingabe lowo ngu-yebo, uma sisebenzisa i-IMAP esikhundleni se-POP? Singayisebenzisa i-IMAP ku-MacMail naku-Outlook?
Ngingasebenzisa noma yiluphi uhlelo lokusebenza. Kodwa-ke, ngincamela ukuhlala neMacMail ngoba yilokho engikujwayele futhi ngenxa yezinzuzo ezibalulwe ngenhla :-)
Umlingani wami webhizinisi nokho, angasebenzisa kuphela i-Outlook. Ishintsha uhlelo lokusebenza. akuyona inketho. Ungumhwebi onekhono kakhulu, onolwazi futhi oxhumeke kahle, kepha uthinta kuphela amakhompyutha lapho kufanele. Akafuni ukuchitha isikhathi esebenzela ukuthi angalusebenzisa kanjani uhlelo angalwazi. Ngakho-ke ngizomsethela i-imeyili yethu yokusekela ku-Outlook ngaye futhi isikhombimsebenzisi kufanele sibe yibhizinisi le-100% njengokujwayelekile kuye.
May 19, 2011 ku-1: 58 AM
Yebo, i-IMAP isebenza kahle kwi-MacMail! Amanye amasevisi asekela kuphela i-POP, noma kunjalo.
May 19, 2011 ku-2: 09 AM
Ngakho-ke impendulo yakho ithi: YEBO, kungenzeka ukuthi womabili amaklayenti ethu e-imeyili edeskithophu amiswe ngekheli elifanayo le-imeyili ngasikhathi sinye, uma sisebenzisa i-IMAP esikhundleni se-POP?
Ingabe yilokho okushoyo?
May 19, 2011 ku-2: 53 AM
Yebo, impela. Ngikwenza nsuku zonke!
May 19, 2011 ku-2: 00 AM
IHu. futhi ngidinga ukuthola ama-imeyili wokusekelwa nakwiklayenti lami ledeskithophu (selivele likusethile lokho futhi lisebenza kahle) njengoba kushiwo, kanye namanye ama-akhawunti wami we-imeyili kusixhumi sami se-MacMail. Lesi yisisekelo sombuzo wami.
Ngingahle ngikwazi mhlawumbe ukusekela ama-imeyili ku-akhawunti yami ye-gmail bese kuba iklayenti lami ledeskithophu kodwa angikwazi ukuphendula imibuzo yamakhasimende kusuka kwiklayenti lami ledeskithophu uma lingasetwanga kahle. Umbuzo nokho awuyona indlela yokusetha ngayo (lokho kulula) kepha ukuthi kungenzeka yini ukuthi amaklayenti ethu ama-imeyili we-desktop we-2 asethwe ngekheli elilodwa le-imeyili lokusekela.